Baydhaba iyo Luuq - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Shan iyo Tobnaad - Caasimada Online
Home Warar Baydhaba iyo Luuq – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shan iyo Tobnaad
Baydhaba iyo Luuq – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shan iyo Tobnaad
Muqdisho (Caasimada Online) – Goor subax ah ayaan gaari wanaagsan kaxeysannay oo aan toos u aadnay Baydhaba. Saddex ayaan nahay – waa Beatrix, Cornelia iyo aniga. Hotel Eden ayaan ku degnay saddxdeennuba.
Xuseen oo Madax u ahaa Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed faraciisa Gobolka Bay ayaa howsha baadi-goobka qoysaska hore u sii waday. Xuseen waa Madaxa Bisha Case ee Baay, waana macallin Jaamici ah oo Dugsiga Sare wax ka dhiga. Waa nin deggan, xushmad badan oo shaqo yaqaan ah. labadiisa shaqana daacad u ah.
Isla maalinta aan nimid ayaan Xuseen la qaadannay shir. Warbixin ayuu na siiyay. Dokumenti hor lehna waan kala qaadannay.
N. S. S*
Subax hore ayaan quraac u fariisannay makhaayadda hotelka. Waxaan ku jirnaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ee safarkeenna maanta aan ugu amba baxeyno Luuq. Annaga oo quraacaneyna, iskana hubeyneyna in ay wax walba noo dhan yihiin oo aan qorshaheenna ku soconno, ayaa waxaa ii yeeray saddex nin oo fadhiya miis aan naga fogeyn. Mid nimanka ka mid ah ayaa i soo dul istaagay oo hadal gaaban igu yiri waan kuu baahan nahay ee noo imow.
Waan u tegey. Waxay gashan yihiin muraayado madmadow, waxaadna mooddaa in ay wax qarinayaan xataa qaabka ay iila hadlayaan ma ahan caadi.
Aniga oo ka koobinaya, waxay ii sheegeen in ay ka tirsan yihiin Nabad Sugidda Qaranka, NSS, ayna doonayaan in ay su’aalo i weydiiyaan. Waxaan su’aashoodii ugu horreysay uga jawaabay in aniga iyo labadan gabdhood aan ka soconno Laanqeyrta Case ee Caalamiga ah, ICRC. Su’aasha labaadna waxaan uga jawaabay in gabdhaha dhalashadoodu ay tahay Swiss.
Waxay yiraahdeen Ethiopia miyaad ka timaaddeen? Maya ayaan ugu jawaabay ee Xamar ayaan ka nimid. Waxay daba dhigeen, hadda ma Ethiopia ayaad u socotaan? Mar kale ayaan u sheegay in aan xaalku sidaa ahayn.
Cabbaar ayay aammuseen oo is fiiriyeen.
Su’aalahooda markaan qiyaasay waxaan gartay in ay ka warheleen in aan waraaqo ka keennay Ethiopia, kuwa kalena aan hadda u sidno.
Waxaa aan u fasiray ICRC iyo waxa ay qabato. Intaa ka dibna waxaan u sheegay howsha aan wadno iyo waxa ay tahay. Waxay yiraahdeen yaa idiin fasaxay? Marka aan gabdhaha ku laabtay oo aan ka soo qaaday ayaan nimanka hordhigay dokumenti. Waa waraaqo caddeynaya oggolaashada Dowladdu in ay howshaan la socoto.
Intaas ka dib way i fasaxeen.
Gabdhaha markii aan u fasiray waxa miiska aan tegey ka dhacay iyo sida ay ku dhammaatay ka dib, waddada Yurkud ayaan ku dhacnay.
Yurkud waa tuulo u dhexeysa Baydhaba iyo Luuq dhagax miiran ah. Dhagxaan aad mooddo in hadda lagu daadiyay ayaa waddada karooran. Inteenna baabuurka saaran, sheeko warkeed daa ee waxaa adag in aan is maqalno.
Waxaan uga gudubnay Luuq. Waxaan ku degnay qolo Mareykan ah oo joogtay xerada Qaxootiga Halbo. Waxaan u maleynayaa in ay ahayd Halbo Two. Casho iyo jiif ayay na siiyeen subixiina wey na quraaciyeen inta aan shaqo loo kallahin. Luuq ayaan subaxaas ka billownay howshii baadi goobka qoysaska.
Habeen labaad ayaan seexannay Luuq. Subixii xigay waxaan u baxnay safar dheer oo qallooc ah. Waxaan ku hakannay tuulada Meyka-reebay. Cillad ayaa gaariga naga gashay. Nasiib wanaag, dhakhso ayaan uga saarnay. Markii aan u weecannay Garbahaarreey oo aan joognay saacado kooban laakiin aan dad badan kula kulannay waxaan sii wadannay safarkeenna. Waxaan u gudubnay Buur Dhuubo iyo Qansax Dheere. Annaga oo kax la ah daal, boorka dusheenna saaranna aad yaabto ayaan u soo hoyannay Baydhaba iyo mar kale Hotel Eden.
Maalintii xigtayna waxaan ku soo laabannay Muqdisho.
Adam Aw Xersi oo hadda ah Wasiir ka tirsan Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa mar dambe ii sheegay in nin ay isku magaalo ahaayeen laga warhelay in Ethiopia ay dhaawac ku qabaty. Waaxaa looga duceyn jiray Dugsi Quraanka iyo Masaajidkaba in Allah ka soo badbaadiyo. Ninkaas waxaa mar dambe la soo sheegay ayuu yiri in la dilay. Waxaa shakiga naga saaray aakhirkii waraaq aad safarkaas keenteen oo maxbuusku soo qoray.
Markii aan Baay iyo Gedo ka soo laabannay, safar kele oo noo qorsheysnaa Beatrix in aan isu raacno wuxuu ahaa Kismaayo.
Muddo markaas dhowr bilood laga joogo ayaan Kismaayo ku tegey safar dhulka ah aniga oo ka socda Radio Muqdisho. Inkasta oo aan safarka Kismaayo aad uga soo helay, howsha maxxiistuna ay wadnaha iiga taallay, kolkaan waan ka cudur daartay safarka. Beatrix waxay Kismaayo isu raaceen Faaduma Shiikh Cabdi oo ka tirsanayd xafiiska ICRC.
Taxanaha Maxaabbiistu wuxuu geli doonaa Qormooyin ku saabsan, heshiiskii Soomaaliya iyo Ethiopia iyo kala beddeleshadii Maxaabbiista dagaal ee labada dal.
Waxaan ka warrami doonaa sida aan u amba bixinnay dhowrkii kun ee ka joogay Ethiopia ilaa aan geyno Diri Doa. Iyo maalin shaqo tii abid iigu farxad badnayd oo ah soo laabashadii Maxaabbiista Soomaaliya ee ICRC ay ka soo qaaday Dire Dawa.
Madaxweyne Maxamed Siyaad ayaa ku soo dhoweeyay airporka. Ka dibn waxay Dowladdu dejisay xerada militeriga ee Xalane. Halkaas oo aniga iyo Cornelia aan wareysi kula yeelannay Maxbuus kasta goonidiisa.
*NSS waa ciidankii qarsoodiga ahaa berigii Madaxweyne Maxamed Siyaad.